အဆင့်မြင့် ဒစ်ဂျစ်တယ် ဓါတ်ပုံရိုက်နည်း စာအုပ်လေးကို မြန်မာလို တွေ့တာနဲ့ ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ် . ဓါတ်ပုံပညာ ဆိုတာဟာလည်း သိပ်တော့ မလွယ်ကူပါဘူး . သူ့မှာလဲ သဘောတရားတွေ အများကြီးရှိပါတယ် . သိချင်ရင်တော့ ဒီစာအုပ်လေးကို ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ .. အဆင်ပြေနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် ..@nyinaymin
အောက်မှာ Download လုပ်လိုက်ကြပါဦး .
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 11:19 AM